ထိုင်းဖိုလီဓာတုဗေဒ ကုမ္ပဏီလီမီတက် (TPCC) 12 | www.wellmart.work
ลงประกาศเมื่อ 27 ก.พ. 2559 อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 08:42:14 น. เข้าชม 395 ครั้ง
ထီဖီစီစီ၏ဓာတုဗေဒကုန်ပစ္စည်းသည် အစိတွန်၊ ဒီမာထီကီတွန်၊ အဆီ 150SN၊ DAA, DBP, DCM, DEG, DINP, DMF, DPG, DOP အေထီလ် အစီတရိတ်၊ အေတီလ် အေတာနော်၊ အိတ်အောက်စီဒိုက်ပဲပါအဆီ၊ ဂရိုင်ဆာရင်-USP၊ ဂရိုင်ဆာရာ၊ အီးဆိုပရိုပီလ် အယ်လ်ကော်ဟော်၊ အိုင်ဆိုရိုပနော်၊ မေထီလင်းကလောရိုင်း၊ မေထီလ် အယ်လ်ကော်ဟော်၊ မေထနော်၊ မေထာနော်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အောက်ဆိုက်၊ မေထီလ်နှင့် အေထီလ် ကိတွန်၊ မိုနိုထအေထနော်လာမင်း၊ မိုနိုအေထီလင်းဂရိုင်ကော်၊ EG, မိုနိုပရိုပီလင်း၊ PCE, PEG, PEG1000, ကာဘိုဖယောင်၊ PPG, တရိုင်ကလိုရိုမေထီလင်း၊ TCE, အဖြူရောင်ဓာတ်ဆီ၊ အဖြူဆီ၊ ဖီအီဖယောင်၊ ဖိုလီအေထီလင်းဖယောင်၊ ဗူထီလ်ကာဗီတိုလ်ဖျော်ရည်၊ ဗူထီလ်ဆဲလ်လိုစုတ်ဖျော်ရည်၊ ဗူထီလ်အစီထိတ်၊ အစီတစ်အက်စစ်ဗူတီလ်၊ ဗူတီလ်အီထာနိုအိတ်၊ ရေနံကလိုရီနိတ်၊ ပလတ်ဆီ၊ ကလိုရင်း52PCT၊ စိုက်ကလိုဟိတ်စာနွန်၊ စိုက်ကလိုဟိတ်စီလ်ကီတွန်း၊ ပေါ်လီမာ၊ ဟိုက်ဒရိုကလိုလစ်အက်စစ်၊ ဗာမိုပလပ်စတစ်၊ ပစ်မယမ်မှုန့်၊ နိုက်ဆစ်အက်စစ်၊ ဖော်မစ်အက်စစ်၊ ဖော့ဖော်ရစ်အက်စစ်၊ အလုမီနီယမ်ဆာလဖိတ်၊ သွပ်စတာရိတ်၊ ပီဗီစီ၊ ပလပ်ဆတစ်ဆိုက်ဇာ၊ ညိုရစ်အက်စစ်၊ လစ်နိုဆာလဖိတ်၊ မိုက်အိုနစ်မဖြစ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဆိုဒါပွာ၊ ယမ်ကာဘိုနိတ်၊ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောက်ဆိုက်၊ ကောင်စတစ်ဆိုဒီ၊ တိုင်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၊ အမည်းရောင်ကာဘွန်၊ N330, N660 ဘယ်ရီယမ်ဆာလဖိတ်၊ အီးထီလင်း၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဆီလီဂိတ်၊ အက်ဆိုပရစ်အက်စစ်၊ ဗီတာမင်-စီမှုန့်၊ ကယ်လဆီယမ်ဆတာရိတ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်အောက်ဆိုက်၊ ကယ်လစီယမ်အောက်ဆိုက်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုက်၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဖျော်ရည်၊ အဖြည့်ပစ္စည်း၊ ဂရိုင်ကော်၊ အယ်လ်ကော်ဟော်၊ ကယ်လစီယမ်နိုက်တရိတ်၊ ဆိုဒီယမ်ဗိုင်ကာဘိုနိတ်၊ မြင်ကွင်းနှင့်ဆျုင်သောတောက်ပဒြပ်၊ ဖထာလိတ်၊ ဖထာလိတ်မရှိ၊ ဖထာလိတ်မဖြစ်၊ အော့စာလစ်အက်စစ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဆာလဖိတ်၊ ရေနံမှထုတ်လုပ်သည့်ဖယောင်း၊ ကယ်လစိုက်၊ ဆတယ်ရစ်အက်စစ်၊ အစိုဓာတ်ဆန့်ကျင်ဒြပ်၊ ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နှင့် အခြားဓာတုဗေဒတို့စသဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ မှန်ကန်သောအခြားအချက်အလက်ကြားချင်လျှင် ထီဖီစီစီ၏ရောင်းချဦးစီးဌာနဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါသည်။
Myanmar chemical myanmar solvent myanmar additive Thailand Chemical distributor thailand chemical exporter thailand chemical manufacturer
อัพเดทล่าสุด : 27 พ.ค. 2562 08:42:14 น.